I-TEEPEE ene-Wi-Fi kunye ne-PAKI (abantu abayi-2-6)
I-Teepee yezibini ezitshatileyo, iintsapho okanye amaqela abahlobo kunye nabalingane abavulekileyo - kwimiphefumlo enomdla ngokubanzi :)
Indawo: ilali encinci entle eyi-2km ukusuka ePrague enethuba lokuya kuhambo ... (sincoma ukubona iCeltic oppidum!)
yokupaka SIMAHLA kunye Wi-Fi!
• Malunga ne-TEEPEE
Uya kuba nokufikelela ngasese kwiTeepee (kwaye iTeepee ngokwayo imi kwigadi yethu). Nceda uqaphele ukuba akukho sitshixo kwiTepee :) Ifakwe kwi-3 iibhedi eziphindwe kabini / oomatrasi kunye neziko kunye neenkuni zendawo yomlilo ziyafumaneka kwisiza. Indlu yangasese (indlu yangasese eyomileyo) ime ngokwahlukeneyo egadini kwaye igumbi lokuhlambela elivulekileyo liyafumaneka egadini.
• Malunga nelali yaseDolní Břežany
Igama elithi Břežany libonisa ilali elele ngaselunxwemeni lomlambo okanye phezu kwenduli, kuba eli gama lineentsingiselo ezimbini ze-etymological: induli okanye ibhanki.
I-Dolní Břežany (“i-Lower Břežany”) ibekwe kumbindi weBohemia kwidolophu yasePrague-West. Idolophu isasazeke kwindawo yeehektare ezili-1,066 kwaye ibandakanya iilali zaseLhota, Zálepy naseJarov. Kwiminyaka yakutshanje, uZálepy kunye noJarov batshintshile kwiindawo zokuzonwabisa ezinezindlu zangempelaveki ukuya kwindawo apho abantu bahlala unyaka wonke. IDolní Břežany imida yasePrague, kodwa ikwaliziko lendalo labanye oomasipala ababekwe ngasentla kwentlambo yoMlambo iVltava: Ohrobec, Točná, Zlatníky, Hodkovice neLibeň, kwaye ngokuyinxenye ikwaZvole, Březová, Oleško, kunye neCholupice.
• Malunga nonxibelelwano lwethu
Ndiza kukwamkela ekufikeni kwakho. Mna nomyeni wam sihlala endlwini ecaleni kwe-teepee, ngoko ke siya kuba kufutshane ukuze sikuncede xa ufuna. Kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kukulungiselela isidlo sakusasa esilungileyo, ukuba uyafuna.
Ndiza kukwamkela ekufikeni kwakho. Mna nomyeni wam sihlala endlwini ecaleni kwe-teepee, ngoko ke siya kuba kufutshane ukuze sikuncede xa ufuna.…